Home News Waa maxay ujeedada loogu daray Dr. Peter Middlebrook gudiga dhaqaalaha? Beecinta hantida...
Waa maxay ujeedada loogu daray Dr. Peter Middlebrook gudiga dhaqaalaha? Beecinta hantida qaranka! (cadeyn)
Dabayaqadii asbuucii la soo dhaafay ayaa Ra’iisal Wasaare Xassan Cali Kheyre waxa uu magacabay gudi loogu magacdaray Gudiga Dhaqaalaha Qaranka. Gudigaan ayaa waxaa lagu daray nin lagu magacaabo Dr. Peter J. Middlebrook. Dad badan ayaa is waydiinaya waa maxay ujeedada ka danbeeysa in Peter Middlebrook ka mid noqdo Gudiga Dhaqalaaha Qaranka ee Soomaaliyeed madaama uu yahay nin ajnabi ah.
Si aad wax uga ogaataan sababta loogu daray, waa lama huraan in aad ogataan qofka uu yahay Peter Middlebrook iyo shaqadiisa. Peter waa nin ganacsade ah madaxna ka ah shirkad lagu magacaabo Geopolicity Inc. oo fadhigeedu yahay Magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Shirkadaan waxaa ay ka shaqeeysaa qaybo badan laakiin sahqadeeda inteeda badan waxa ay la xiriirtaa wax soo saarka kheyraadka dabiiciga ah iyo arimo kale oo aan la shaacin. Peter waxaa shirko kula ah ganacsigaan wasiirkii hore ee Arimaha Dibadda ee Somaliland. Maxamed Cabdullahi Cumar. Dr Peter waxa uu horay ula soo shaqaystay dowladda Somaliland waxa uuna hadda u yahay lataliye gaar ah dowladda Imaraadka Carabta gaar ahaan shirkadda DP World. Waxa uu ka qaataa shirkadda DP World mushaar joogta ah. Sanadkii hore ayaa ay ahayd markii Baarlamaanka Soomaaliya uu soo saaray go’aan dalka looga ceyriyay shirkadda DP World.
Intii uu ku guda jiray arimaha Soomaliland waxa uu lacag maalgalin ah waydiistay hay’adda kaalmada Maraykanla ee loo yaqaab USAID oo diiday in ay maalgalintaas bixiso. Dhanka kale Peter Middlebrook ayaa saaxiib hoose la ah hogaamihii xisbiga “conservative party” Sir Michael Howard, ahaana madaxa shirkadda SOMA OIL AND GAS ee dhawaan lagu qasbay in uu iska casilo. Shirkaan waxaa saami ku leh Ra’iisal Wasaare Xassan Cali Kheyre iyo qaar ka mida qooyskiisa.
Ujeedada uga wayn ee Peter Midllebrook loogu soo daray gudiga qaranka ayaa ah in uu qayb ka noqdo qorshaha la doonayo in lagu xaraasho hantida qaranka, gaar ahaan kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya. Wasiirka Qorsheeynta Qaranka Jamal Maxamed ayaa ka codsaday Midowga Yurub iyo Hay’ada USAID in ay bixiso mushaarka gudiga oo (qofkiiba) bishii kor u dhaafaya $17,000 oo doolar. Hay’ada USAID oo baaritaan ku sameeyay gudiga la magacaabay ayaa diiday codsiga dowlada iyada oo ay ugu muuqatay in ayan dan Soomali ah ku jirin in ganacsato ajnabi ah mushaar lagu siiyo in ay ka tala bixiyaan dhaqaalaha dalka iyada oo laga yaabo in ay danahooda ka fiirsadaan . Dhanka kale Wasiir Jamaal ayaa codsi kale u gudbiyay hay’adda UNDP taas oo ka codsaday in ay bixiyo mushaarka gudiga. Hay’adda UNDP oo lagu yaqaan musuq-maasuq iyo lunsashada lacagta shacabka Soomaaliyeed loogu soo dhiibay ayaan wali ka soo jawaabin codsiga Wasiirka.
Waxaa nasiib xumo ah in ayan jirin gudi Baarlamaan oo arintaan baaritaan ku sameeyo si loo xaqiijiyo in aan kheyraadka dalka loo gacan galin cadow Soomaaliyeed. Sidoo kale sidee bay suuragal ku tahay in shaqsi u shaqeeyo shirkad laga mamnuucay dalka Soomaaliya in dowlada Soomaaliya shaqaaleeysiiso.
Previous articleSadex Musharax oo Soomaali ah oo Guulo Kasoo Hoyay Doorashooyinka Ka Dhacay Mareykanka
Next articleRW Kheyre iyo Guddoomiyaha Baarlabaanka Maxamed Mursal oo isku qilaafay ka qeyb galkii casha sharafta loo sameeyay Wasiirka Arrimaha Dibadda Eriteriya (Sababta)
Fact check: Psaki claims US doesn’t ‘have a presence on the...
Shaqaallaha Shirkadaha Shidaalka ka baaro DDS oo la Daad-gureeynaayo!!